Ampidino Hello Neighbor 2 ho an'ny Windows
Ampidino Hello Neighbor 2,
Hello Neighbor 2 dia ao aminny Steam! Hello Neighbor 2 Alpha 1, iray aminireo lalao fampihorohoroana miafina tsara indrindra aminny PC, azo alaina maimaim-poana izao. Hello Neighbor 2 Alpha 1 dia azo alaina maimaim-poana alohanny famoahana ny Hello Neighbor 2. Hello Neighbor, iray aminireo lalao mampatahotra mangingina tsara indrindra aminny PC sy finday, dia tohiny.
Manandrana manenjika anAndriamatoa Peterson, izay nanjavona taorianny zava-nitranga taminny lalao voalohany, dia zavaboary mifono mistery no arahinao. Hello Neighbor 2 dia ao aminny Steam!
Ampidiro Hello Neighbor 2
Hello Neighbor 2 dia lalao mampihoron-koditra miafina izay enjehinny zavaboary mitady ny namanao mifono mistery. Milalao aminny AI mandroso sy mianatra samirery ianao izay manaraka sy mampifanaraka ny hetsika rehetra ataonao.
Fianaran-tena AI: mandinika ny tontolo iainana ny faharanitan-tsaina ary mitady hatrany ny fomba hanafika anao. Manaraka anao ny faharanitan-tsaina. Manana fahazarana ny faharanitan-tsaina; Mandeha any anaty ala hatory, misakafo, mahandro, mety handatsaka kitapo vatana.
Mampiasa zavatra aminny fomba fanaonao ny faharanitan-tsaina. Ohatra; Ny fahitana artifisialy dia manao toy izany koa rehefa mampiasa ny fitaovana famonoana afo hiakatra ianao. Izao tontolo izao misokatra: Jereo ny Raven Brooks, tsy misy ferana ary afaka mankaiza ianao manomboka aminny fiandohanny lalao.
Ny faharanitan-tsaina dia miaro ny trano rehefa manandrana miditra ianao,manaraka anao aminizay alehanao io. Manana ny tantaranao manokana ianao. Ny fomba filalaovanao no mamolavola ny tantara.
Miova izao tontolo izao araky ny zavatra nataonao. Traikefa aminny boaty Sandbox: Mila mitady vahaolana mamorona ianao hamahana ny piozila aminny alàlanny fampifangaroana ireo zavatra samihafa, ny lafiny tontolo iainana ary ny fahaiza-manao aminny sehatra. Ny ankamaroanny hetsika an-tserasera dia voalahatra aminny filaharana maharitra sy tsy mandeha; izany dia manome fahatsapana velona anizao tontolo izao.
Afaka mahazo valiny samihafa ianao aminny fandinihana ireo zava-mitranga ao anaty lalao.Afaka mahazo valiny samihafa ianao aminny fandinihana ireo zava-mitranga ao anaty lalao.Afaka mahazo valiny samihafa ianao aminny fandinihana ireo zava-mitranga ao anaty lalao.
Salama mpiara-monina 2 Fepetra takiana
Ny fitaovana tsy maintsy anananny solosainao hilalao ny Hello Neighbor 2 dia voafaritra araka ny takianny rafitra Hello Neighbor 2 PC; Fepetranny rafitra farafahakeliny
Rafitra miasa: Windows 10 64-bit
Processeur: Intel i5 na tsara kokoa
Fahatsiarovana: RAM 6 GB
Sary: Nvidia GTX 770 sy ambony
Fitehirizana: toerana malalaka 4 GB
Fepetra takiana aminny rafitra
Mpandrindra: Intel i7
Fahatsiarovana: RAM 8 GB
Sary: Nvidia GTX 1060